Entsha! Ikhabhathi epholileyo kufutshane neRoslyn kunye neSnoqualmie Summit
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKari & Jeb
Yonwabela amaxesha ama-4 olonwabo e-"Lake Easton Lodge", ikhabhathi yangoku kodwa epholileyo e-Easton WA. ILake Kachess, iLake Easton, kunye noMlambo waseYakima zonke zihamba imizuzu emi-5. I-Snoqualmie Summit yimizuzu eyi-15 yokuqhuba njengoko kunjalo noRoslyn, uCle Elum kunye noSuncadia. Yonwabela izinto zakudala, iindawo zokutyela, iwayini/iwhiskey yokungcamla, kunye negalufa. I-Lodge ifanelekile kumaqela amancinci. Abantwana kunye nezinja zamkelekile!
Le yikhabhathi enamabali ayi-1,680 sq ft 2 enamagumbi okulala ama-3 (zonke iibhedi ezinobukhulu bokumkanikazi), amagumbi okuhlambela ayi-2, amagumbi okuhlala ayi-2, indawo yemidlalo, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle elinebhara kunye nendawo yokutyela ekufuphi, kunye negumbi lokuhlamba impahla elinewasha / isomisi kunye amakhonkco amaninzi kwiimpahla ezimanzi kunye neetawuli. Kukho ibhedi eyongeziweyo yobukhulu bokumkanikazi kwialcove ephuma kwigumbi lokuhlala phezulu. Igumbi lokuhlambela elikumgangatho osezantsi lihlaziyiwe ngokutsha kwaye linenyathelo lokunyuka lingene kwibhafu enzulu yokufunxa / ishawari ye-combo. Gxumela ngencwadi phambi kweziko elipholileyo legesi okanye wonwabele iNetflix, iHulu, njl.njl. koomabonakude ababini abakrelekrele. Itafile yekhadi, imidlalo yebhodi, iipuzzles, kunye nentwana yokudlala yabantwana ikwindawo yomdlalo kunye neekhabhathi phezulu. Isantya esiphezulu sokufikelela kwi-wireless.
Pheka kwi-propane grill kwaye ujabulele ukutya kwangaphandle / ukutyelela kwiindawo ezi-2 ezahlukeneyo zokuhlala. Kukho indawo yomlilo egqunyiweyo ukuze uhlale ufudumele kwaye upholile ngaphandle kuyo nayiphi na imozulu. Itanki yepropane ibonelelwe ngetafile yomlilo kwaye ungaphinda uyigcwalise ukuba ifuneka kwisikhululo sakwaShell ngaphantsi kweemayile kude. Ebusika sinika iifosholo zekhephu, iileyidi, kunye neeseti ezi-2 zekhephu. Ehlotyeni bamba iitawuli zaselwandle, iibhatyi zobomi, ingubo yepikiniki kunye nentloko ukuya kwelinye lamachibi akufuphi.
Indawo ezolileyo eneendawo ezininzi. Umxube wabahlali bexesha elizeleyo kunye neerenti zeeholide / iikhabhathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Kari & Jeb
Siza kukuthumelela umbhalo oneenkcukacha zoqhagamshelwano. Zive ukhululekile ukusibhalela ukuba kukho into oyifunayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Easton